कांग्रेसका तर्फबाट पहिलो मुख्यमन्त्रीलाई विश्वप्रकाश शर्माले किन लेखे यस्तो पत्र? « Sagarmatha Daily News
कांग्रेसका तर्फबाट पहिलो मुख्यमन्त्रीलाई विश्वप्रकाश शर्माले किन लेखे यस्तो पत्र?
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट पहिलो मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई खुलापत्र पठाएर केही सुझाव दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता पोखरेललाई मंगलबार लेखेको पत्रमा प्रवक्ता शर्माले गण्डकी प्रदेशलाई राम्रो बनाउन आग्रह गर्दै सुझाव पनि दिएका हुन्।
कांग्रेससँगै नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद्सहितको गठबन्धनका मुख्यमन्त्री पोखरेल संघीयता कार्यान्वयन भएपछि कांग्रेसका तर्फबाट पहिलोपटक मुख्यमन्त्री भएका हुन्।
कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा लेख्छन्ः
श्री कृष्णचन्द्र नेपालीज्यू,
मुख्यमन्त्री गण्डकी प्रदेश।
बधाई तथा शुभकामनासहित संक्षिप्त सुझाव
अक्सिजन सकिएर पोखराको अस्पतालमा जीवन गुमाएकी सुत्केरी अनि खर्च अभावमा अस्पतालबाट निकालिएको २१ दिनको शिशुलाई बजेट निर्माण गरिरहँदा सम्झनु नै हुनेछ। यतिबेलाको शासकीय जिम्मेवारी, राजनीतिक दायित्व अनि कर्तव्य र बाटो बुझ्न भिन्न दुई परिवारका यी दुई अनुहार पर्याप्त छन्।
समय संवेदनशील छ। राम्रो सावित हुन धेरै राम्रो गर्नुपर्छ। आलोचित हुन एक गल्ती या एउटा भ्रम काफी हुन्छ। त्यसैले छायाको होइन ऐनाको सुझाव लिनुहोस्।
हेक्का रहोस्, तपाईंको कर्मसँग पार्टीको आगामी छवि गाँसिन्छ। तर, नभुल्नोस् संसदीय दलको नेता एउटा पार्टीको हुन्छ, मुख्यमन्त्री सबैको। प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्ने अवसरलाई सकारात्मक सन्देशले प्राण भर्नुहोस्। प्रश्नलाई प्रोत्साहित र आलोचनालाई स्वागत गर्नुहोस्। तिनको प्रकाशमा रुपान्तरण निश्चित गर्नुहोस्। राजनीतिप्रतिको वितृष्णा कम गर्न तब योगदान पुग्नेछ।
गलत निर्णय नगर्न, सच्याउन र नकारात्मक प्रचार चिर्न संयोजन गर्नुहोस्। सही निर्णय गर्न विज्ञलाई सुन्नुहोस्। जान्नुहुन्छ नै– पद आउँछ, जान्छ। तर, स्मृतिमा रहन्छ कर्महरू। इमान, पारदर्शिता र नम्रतालाई केन्द्रमा राख्नुहोस्।